DhammaSong Videos - Page 3
by Admin Added6years ago 531 Views /0Likes
မာမာအေး - mp3 တေးသီချင်းကို စကားဝါမြေတေးဥယျာဉ်မှ ရရှိပါတယ်ရှင်။
ပါရမီရှင် (ဝင်းဦး တင်တင်မြ)
by Admin Added6years ago 524 Views /0Likes
တာနောယက္ခ Courtesy of Sein Win recording
မဟာဇနကဇာတ် _ တီး- စန္ဒရားအေဝမ်းခင်မောင်၊ ဆို- ဝင်းဦး၊
မဟာဇနကဇာတ် လုံ့လနှင့် ဝီရိယမှာ၊ လျှော့ကြရင် မှားခြင်းပါ၊ လိုသာလိုမယ် ပိုဘူးဘယ်ခါ၊ ငုံ့မိတော့ သဲတိုင် စွဲကိုင် တက်နိုင်ရင် ထိပ်ဖျားရောက်နိုင်တာ။ အလောင်းတော် မဟာဇနက ရွှေပင်လယ် ရေပြင်ကျယ် ကူးတော်မူရရှာ။ ခုနစ်ရက်တိုင်တိုင် သဲသဲမဲမဲဇွဲလည်း မလျှော့ပါ၊ လုံ့လကိုထု
by Admin Added6years ago 520 Views / 1 Likes
ပုဂံမြို့ဟောင်း တစ်နေရာ - တင်တင်မြ
by Admin Added6years ago 517 Views /0Likes
ဂေါတမမြတ်ဘုရားဂုဏ် - မာမာအေး
သမ္ဗုဒ္ဓေ = Sam Buddhe _ ရေး- ဂီတာတင်အုန်း၊ ဆို- ရီရီသန့်၊
Sam Buddhe, Dhamma song was sung by Yi Yi Thant. The lyric was composed by Guitar Tin Ohn. Mohnyin Sam Buddhe cetiya was built in 1301 B.E. (1939). According to the motto "Mya Shwe Ngwe Sein Thee Hsaung", Sam Buddhe pagoda consists of 582362 images of the
ရှင်သီဝလိ = Shin Sivali _ ဆို- တင်တင်မြ
Shin Thiwali Shinthiwali was the son ofaking's daughter, and he had to remain in his mother's womb for seven long years because ofasin7inapast existence. Then for one whole week the mother could not give birth, and on the seventh day she said to h
ရွှေပြောင်ပြောင် ဝင်းဦး တင်တင်မြ
by Admin Added6years ago 510 Views /0Likes
ရွှေပြောင်ပြောင် ဝင်းဦး တင်တင်မြ Courtesy of Sein Win recording
မြောက်ကျွန်းသမ္ဗုဒ္ဓေ - တင်တင်မြ
ရှင်တစ်ထောင်နေ့ _ ဆို- ရီရီသန့်၊ ဝင်းဝင်းအောင်၊
by Admin Added6years ago 503 Views /0Likes
ရှင်တစ်ထောင်နေ့ Day of Shin Tahtaun ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့် ၁၅ ရက်၊ တနင်္ဂနွေ။ On the banks of the river, Nerañjarā, there lived three brothers of ascetic. Their names were Uruvela Kassapa, Nadi Kassapa and Gaya Kassapa. Uruvela Kassapa lived with five hu
သြ၀ါဒပါတိမောက်အခါတော်နေ့ _ ဆို- ရီရီသန့်၊ ဝင်းဝင်းအောင်၊
by Admin Added6years ago 497 Views / 1 Likes
Ovada Patimokkha သြ၀ါဒပါတိမောက်အခါတော်နေ့ ဆို- ရီရီသန့်၊ ဝင်းဝင်းအောင်၊ The Full Moon Day of Dabodwe (February) (၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့် ၁၅ ရက်၊) The word Pali “Patimokkha” means keeping away from suffering of the four nether worlds, Apaya. The Buddha
by Admin Added6years ago 482 Views /0Likes
ပါရမီတော် - တင်တင်မြ
သမ္ဗုဒ္ဓေ - စိုးစန္ဒာထွန်း
၀၉။ မင်္ဂလာဆုတောင်း - တင်တင်မြ
by Admin Added6years ago 458 Views /0Likes
ဦးထွန်းရွှေ + ရီရီသန့် 
၀၄။ မြတ်ဒေသနာ - တင်တင်မြ
by Admin Added6years ago 449 Views /0Likes
ရွှေလာဘ်ပွင့်ပွားနမောငါး - တင်တင်မြ
ရေး / ဆို - ဂီတစာဆို တက္ကသိုလ်အေးကို